Ugu yaraan hal qof oo ku dhintay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan hal qof oo ku dhintay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho
October 10, 2016 Abdi Omar Bile Somalia 0
Qarax gaari Muqdisho. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay qarax gaari oo ka dhacay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, sida ay ilo-wareedka sheegayaan.
Qaraxa ayaa ka dhacay duhurnimadii maanta oo Isniin ah Suuq Bacaad oo kuyaala degmada Yaakhshiid ee Muqdisho.
Sida ay ku warantay wakaalada wararka dowlada ee Sonna maanta oo Isniin ah ciidamada amaanka ayaa qabtay darawalkii gaariga waxayna ka qabsadeen hub kahor qaraxa inta uusan dhicin.
Sida ay wararka sheegeen, ugu yaraan afar qof ayaa ku dhaawacantay qaraxa.
Ma jirto cid si dhaqso ah u sheegatay masuuliyada weerarkaas, balse saraakiisha amaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ay umalaynayaan in uu ahaa shaqada kooxda hubaysan ee Al-Shabaab, taasoo u dagaalamaysa sidii ay awooda uga tuuri lahayd dowlada uu caalamka taageero ee Soomaaliya oo fadhigeedu yahay Muqdisho.
July 19, 2016 Masar oo qalab militari ugu deeqday Soomaaliya
September 11, 2016 Haayada nabadsugida NISA oo sheegtay in labada beri oo soo socda aan wax hub ah lagu dhex qaadan Karin magaalada Muqdisho
Car bomb kills at least one person in Mogadishu
Gunfire heard in Galkayo town amid ceasefire calls